ओम अस्पतालमै गैरकानुनी डाक्टर !
काठमाडौँ । ओम अस्पतालमा एक विदेशी डाक्टरले गैरकानुनीरूपमा चिकित्सकीय अभ्यास गरिरहेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । ओमको क्यान्सर रोग विभागमा कार्यरत डा. पंकजकुमार बर्मनले गैरकानुनी रूपमा उपचार गर्दै आएको आरोप लागेको हो ।
बिएन्डबी अस्पतालमा काम गर्न आएका भारतीय नागरिक डा. बर्मनले पहिलो पटक सन् २०१३ डिसेम्बर १५ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट विदेशी नागरिक चिकित्सकका रूपमा एक वर्षका लागि काम गर्ने अनुमति पाएका थिए ।
बिएन्डबी अस्पतालले सीप अभिवृद्धि गर्ने कार्यका लागि भन्दै काउन्सिलबाट अनुमति मागेको थियो । बिएन्डबीले सीप अभिवृद्धिका लागि भनी अनुमति मागे पनि डा. बर्मन उपचारमा संलग्न थिए ।
डा. बर्मनले चौथो पटक बिएन्डबी अस्पतालमा काम गर्नका लागि सन् २०१६ डिसेम्बर ७ मा काउन्सिलबाट अनुमति लिएका थिए । उनी हाल ओम अस्पतालको क्यान्सर रोग विभागमा संलग्न छन् । बिएन्डबीले डा. बर्मनले आफ्नो अस्पताल छाडेको जानकारी मेडिकल काउन्सिललाई लिखितरूपमा दिइसकेको छ ।
काउन्सिलको नियमअनुसार विदेशी नागरिक चिकित्सकका हकमा जुन अस्पतालमा काम गर्ने हो सोही अस्पतालमा अनुमति लिनुपर्ने र उसले अर्को अस्पतालमा काम गर्न नपाउने नियम छ तर डा. बर्मन भने ओम अस्पतालमा गैरकानुनीरूपमा कार्यरत छन् ।
डा. बर्मनले सन् २०१३ मा मेडिकल अन्कोलोजीमा डिएनबी (डिप्लोमेट अफ नेसनल बोर्ड) गरेका हुन् । डा. बर्मनले ओम अस्पतालमा आइतवारदेखि शुक्रवारसम्म बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म उपचार गर्दै आएका छन् ।
ओम अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक बाबुकाजी कार्कीले डा. बर्मनलाई नियुक्ति पत्र दिएको स्वीकार गरेका छन् । न्यूज अभियानका लागि नव जनप्रहारको साथमा ।